Air ကိုကူရှင် Puff, ကူရှင် Puff, ကူရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းက Puff ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:Air ကိုကူရှင် Puff,ခေါငျးအုံး Puff,ခေါငျးအုံးဖောင်ဒေးရှင်းမှ Puff,မိတ်ကပ် Puff,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Air ကိုကူရှင် Puff
Air ကိုကူရှင် Puff ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Air ကိုကူရှင် Puff, ခေါငျးအုံး Puff ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ခေါငျးအုံးဖောင်ဒေးရှင်းမှ Puff R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းသော Grey Color Makeup Puff  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Multi Function နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေးမျက်နှာသန့်ရှင်းရေးအခင်းများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Non-latex ရေမြှုပ် BB Cream Air Cushion Puff  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပျော့ပျောင်းသောအလှကုန်ပစ္စည်း Air Cushion Powder Puff  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းပန်းရောင်အရောင်မိတ်ကပ် Puff  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကောင်းသောအရည်အသွေး Air ကိုကူရှင် Powder Puff  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကောင်းဆုံး BB Cream Air ကိုကူရှင် Puff  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
non-စေး Air ကိုကူရှင် Powder မိတ်ကပ် Puff  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထူးခြားတဲ့အရောင်များ Air ကိုကူရှင် Puff  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မိတ်ကပ်ရေမြှုပ် Air ကိုကူရှင် Puff  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
BB Cream Air ကိုကူရှင်အလှကုန် Puff  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
1. စုပ်ယူနိုင်မှုပိုသည်၊ troditional သုတ်ပဝါထက် ၇ ဆပိုများသည်။ ညင်သာစွာအစိုဓာတ်ကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ကောင်းစွာ wrung ။ 2. ဝါဂွမ်းထက်ပိုအစိုင်အခဲမိုက်ကရိုဖိုင်ဘာပစ္စည်းသည်ရေကိုပိုမိုစုပ်ယူသည်။ 3. Anti- mite, ဘက်တီးရီးယားဆန့်ကျင်ကုသမှု။...
Multi Function နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေးမျက်နှာသန့်ရှင်းရေးအခင်းများ
ထုပ်ပိုး: package ကိုဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းလုပ်လိမ့်မည်။ ရေမြှုပ်တစ်ခုစီတွင် OPP အိတ်တစ်ခုရှိသည်။
ရေမြှုပ်ကိုရေထဲတွင်စုပ်ပြီးသင်၏မျက်နှာပေါ်ရှိမိတ်ကပ်ကိုညင်သာစွာသုတ်ခြင်း အသုံးပြုပြီးနောက်သင်သန့်ရှင်းရေးအတွက်နွေးသောရေနှင့်ဆပ်ပြာကိုသုံးနိုင်သည်။ စုပ်ယူနိုင်စွမ်း ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ရေးကုသမှု။ သင်၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုပို တယ်ရီနှင့်အတူ...
၁။ အရေပြားနှင့်သင့်လျော်သော hydrophilic ပစ္စည်းများသည်မတည့်ခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အရေပြားအမျိုးအစားအတွက်မဆိုသင့်လျော်စေသည်။ ၂။ ချစ်ပ်များကျဆင်းခြင်းမရှိပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အမှုန့်ဖြစ်သောစေးစေးစေးစေးများကအသုံးပြုနေစဉ်အမှုန့်များကျလိမ့်မည်။ 3....
ကာတွန်းပုံစံလေထုရေမြှုပ်ကိုစိုစွတ်။ ခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပျော့ပျောင်းသောပုံသဏ္cuteာန်ရှိပြီးမိန်းကလေး၏နှလုံးသားကိုကျေနပ်စေသည်။ သင်၌ရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်၎င်းကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ချစ်မိလိမ့်မည်။...
1.Fashionable ဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်း တက်စေရန်အလွယ်တကူမျက်နှာနှင့်ပေါ်မဆိုအသုံးပြုရန် 2.Perfect ကတက်စေရန်အမြိုးသမီးမြားအဘို့ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုပါပဲ, အလွန်အဆင်ပြေ 3.Feels တက်စေရန်မိတ်ကပ်, အလှကုန်ပစ္စည်းအလှဆင်စုံလင်အပေါ် 4.Used...
ကောင်းသောအရည်အသွေး Air ကိုကူရှင် Powder Puff
ဒါဟာပျော့ & ချောမွေ့ Non-ပုံပျက်သော non-Discoloration အရောင်မျှကန့်ကွက်စရာအနံ့, ထပ်တလဲလဲသန့်စင်နိုင်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမအက်ကွဲအစအန drop ကြပါဘူး။ သငျသညျတိုင်းတစ်ခုတည်းအချိန်ဟာအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအခြေခံအုတ်မြစ်လျှောက်လွှာပေးပါ။...
အကောင်းဆုံး BB Cream Air ကိုကူရှင် Puff
Black နဲ့အနီ, unform သိပ်သည်းဆ, အမှုန့်ကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်ပျော့ပျောင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့သောလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ သိမှတ်ဖွယ်အခြမ်း ဖုံးကွယ် coverge ဘို့, ကအသားအရေရဲ့သေးငယ်တဲ့ထောင့်ကိုက်ညီ။ round ခြမ်း ခြုံငုံအလှဆင်ရန်အတွက်အသုံးပြု Sofe နှင့် elastic, ကောင်းသော...
non-စေး Air ကိုကူရှင် Powder မိတ်ကပ် Puff
အခြေခံအုတ်မြစ်လျှောက်ထားရန်အသုံးပြုဖောင်ဒေးရှင်းအညီအမျှမျက်နှာ၌ရှိသမျှသောအသေးစိတျအပျေါပျံ့နှံ့စေနိုင်သည်။ ကိုယ့်အသုံးမပြုခင်သန့်ရှင်းခံရဖို့လိုအပ်ချက်ဝယ်သောအမှုန့် puff, အရေပြားနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေခံစားချက်ပါစေ။ fluffy အဆိုပါအမှုန့် puff...
အဆိုပါထုတ်ကုန်စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့တဲ့သုံးနိုင်တယ်။ အဆိုပါမိတ်ကပ်အတွက်ညင်ညင်သာသာက DAB နှင့်သဘာဝ, အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောကြည့်ဘို့သင့်အသားအရေတစ်လျှောက်က bounce ။ အများဆုံးလွှမ်းခြုံနှင့်အတူအနည်းဆုံးစုပ်ယူမှုနှင့်နောက်ဆုံးမှဖန်ဆင်း!...
ပြင်အလွှာ-အသားအရေ-ဖော်ရွေ, ကလေးကဲ့သို့အသားအရေခံစားရ ပစ္စည်းမှ soft သွားလာရင်း, သင်အလွယ်တကူမိတ်ကပ်တက်သွားကြကုန်အံ့, အလွယ်တကူအရောင်ကိုပြောင်းလဲ wont't ။ အတွင်းစိတ်အလွှာ-elastic အလွှာလေကြောင်းခေါငျးအုံး elastic အလွှာလေကြောင်းခေါငျးအုံး,...
BB Cream Air ကိုကူရှင်အလှကုန် Puff
1. elastic ပျော့နှင့်တာရှည်ခံပစ္စည်းများလုပ်ခဲ့ပါ။ 2. Breathable & Lightweight ။ ပျော့နှင့်မထိနဲ့သုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေ, အမှုန့်ကိုစို့မထားပါနဲ့။...
တရုတ်နိုင်ငံ Air ကိုကူရှင် Puff ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် Air ကိုကူရှင် Puff အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ Air ကိုကူရှင် Puff,ခေါငျးအုံး Puff,ခေါငျးအုံးဖောင်ဒေးရှင်းမှ Puff,မိတ်ကပ် Puff,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် Air ကိုကူရှင် Puff ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ Air ကိုကူရှင် Puff အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် Air ကိုကူရှင် Puff,ခေါငျးအုံး Puff,ခေါငျးအုံးဖောင်ဒေးရှင်းမှ Puff,မိတ်ကပ် Puff,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ Air ကိုကူရှင် Puff အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
Air ကိုကူရှင် Puff ခေါငျးအုံး Puff ခေါငျးအုံးဖောင်ဒေးရှင်းမှ Puff မိတ်ကပ် Puff ဝါသနာရှင် Brush